Grid rafitra, ny maha-zava-dehibe ny fampiasana azy ireo amin'ny endrika. | Famoronana an-tserasera
Vicky | | Graphic Design, Fitaovana famolavolana, Cheats
Efa naheno momba ilay malaza ianao grids ampiasaina amin'ny famolavolana Ary io dia ny tsy tokony odian-tsy jerena ny maha-zava-dehibe ny fampiasana azy. Ny grid na ny grids dia manampy antsika hanafatra ny endritsika amin'ny toerana iray, handamina azy ary hanomana azy tsara amin'ny fampiharana azy amin'ny sehatra rehetra.
Betsaka ny mpamorona no aleony tsy mampiasa grid satria tsapany fa mametra ny fahaizany mamorona izy ireo, raha ho an'ny hafa kosa dia ilaina ny fampiasana grid. Ny milamina dia tsy midika hoe voafetra, ny grids dia fitaovana azo ovaina, tapaka ary mety ny fototry ny endrika rehetra. Ny fampiasana azy ireo dia mahatonga antsika hanana fifehezana tanteraka ny volavolantsika ary ny valiny tadiavintsika hahazoana dia mazava.
Ny fampiasana grids dia zavatra tsy voatery atao, na dia misy aza ny fitsipika mifangaro izay manoro hevitra ny fampiasana azy. Noho io antony io, nandritra ny taona maro, maro ny mpamorona sy ny studio famoronana, eo ambanin'ny fahalalàn'ity fitaovana ity, no nametraka andiana grids tena ilaina ary koa grids manokana.
Ahoana no hahalala bebe kokoa momba ireo grid ireo? afaka mahita fampahalalana mahasoa tsy manam-petra momba ny fampiasana grids amin'ny Internet izahay, fa kosa mamporisika ilay boky Grid rafitra de Josef Müller-Brockmann, dia boky torolàlana henjana ho an'ny mpamorona izay ampisehoany amintsika ny fanoratana amin'ny endriny rehetra amin'ny maha-peta-drindrina, bokikely, magazine, katalaogy na fanontana. Dia a boky hanontaniana ary eo am-pelatanana hatrany rehefa mandrafitra ny volavolainay afaka mividy [amazon link = »B00HNEBO3I» lohateny = »eto» /]. Ny fisehosehoana tsara dia mety ho vokatry ny fampiasana grids sy fahalalana mandamina kokoa ny sehatr'asao.
Azonao atao ny mividy an'ity boky ity amin'ny fivarotam-boky na ara-nofo na an-tserasera. Aza adino fa afaka mamorona grids anao manokana ianao araka ny filanao rehefa mamolavola, fa aloha tokony ho fantatrao ny fomba fiasan'izy ireo hahafahany mamorona azy ireo araka ny itiavanao azy.
Ireto misy ohatra amin'ny grid ampiasaina hananganana logo voalanjalanja sy fanitsiana fanovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Grid system, boky ilaina ho an'ny famolavolana
Ny vaovao tonga amin'ny Photoshop amin'ny iPad amin'ny tapany voalohany amin'ny taona 2020